Gunada Bulshada – Clean Energy Columbus
Clean Energy Columbus waxa ay siisaa gunnooyin deegaan, caafimaad, iyo dhaqaale bulshadeena iyaga oo ikhtiyaarkaaga ilaalinaya.
Caafimaad wanaagsan, tayo wanaagsan oo nolosha ah, fursad loo siman yahay oo jiilasha soo socda ah. Waana taas sababta ay tamarta nadiifta ahi ay muhiim ugu tahay Columbus. Barnaamijka Clean Energy Columbus waxa uu u siiyaa gunno iyo qiime bulshada Columbus ee weyn qaabab kala duwan.
Tamar Nadiif & Joogta ah
Marka la dhaqan geliyo Clean Energy Columbus, bulshadeenu waxay samayn kartaa isbadal wayn, oo degdeg ah oo tamarta nadiifta ah oo ay kaga caawinayso yaraynta wasakhda oo laguna hormarinayo deegaankeena. Iyada oo laga duulayo qiimayaasha ka qaybqaadashada ee la qiyaasay, barnaamijka waxaa looga fadhiyaa inuu yareeyo wasakhda ilaa 1.4 mitirig tan - taas oo u dhiganta in 300,000 oo gaadhi la iska dhigo!
Barnaamijku waxa uu mari doonaa dhabo dheer oo uu ku taageerayo yoolka cimilada iyo joogtaynta ee muddada dheer ee bulshadeena - noqoshada Bilaa Kaarboon 2050. Iyada oo loo marayo barnaamijka, Magaaladu waxay heli doontaa Deeqda Bulshada taas oo dib loogu maalgelin doono bulshadeena dhanka joogtaynta iyo cimilada. Waanu ognahay in isbadalka cimiladu uu yahay mushkilad bulshee iyo cadaalada qoomiyadeed, oo saamayntiisu uu si xun u saameeyo bulshooyinkeena madaw, buniga ah iyo kuwa dhaqaale ahaan liita. Iyada oo aanu si gaar ah diirada aanu ugu saarayno sinaanta, maalgelintaasi waxaa lagu doonayaa in looga faa'ideeyo dadkeena deegaanka ah ee ugu nuqul iyo dadka ku jira jiida hore ee isbadalka cimilada.
Shaqooyinka Tamarta Nadiifta ah
Barnaamijyada Clean Energy Columbus waxaa laga heleyaa kumanaan shaqo oo mushahar wanaagsan oo leh gunooyin dheeraad ah, sidoo kalena u doonaya taageero iyo abuurida shaqaale deegaan, oo kala duwan kuwaas oo kusoo jira beebabka shaqada ee shaqada tamarta nadiifta ah ee halkan Columbus. Wax ka badan 4,000 oo shaqo ayaa ka abuurmi doona Gobolka Ohio ee dhismaha iyo hagaajinta hantida cusub ee dabaysha iyo soolarka si loogu shido guryaheena iyo ganacsiyada yaryar. Markay bilawdo barnaamijka, AEP Energy waxay qaadan doontaa 20 shaqaalo oo Labada Gelinba ah oo ka shaqeeya Xarunta Daryeelka Macmiilka ee halkan Columbus, oo waxay kala shaqaynaysaa shuraakooyin sida MPACT Community Action iyo Columbus Urban League oo kale inay shaqaalaysiiso 70 Wacyigeliye Xiliyeed oo laynka beebka ah oo waxaa mustaqbalka la filanayaa inay ka noqdaan shaqaale rasmi ah waaxda tamarta nadiifta ah.
Barnaamijka waxaa qayb ah, Magaalada Columbus iyo AEP Energy waxay samayn doonaan Gudi Kobcinta Shaqaalaha Tamarta Nadiifta ah oo leh miisaaniyad u gaar ah, oo lagu doonayo in lagu taageero shaqo abuurista deegaanka, ee kala duwan ee laynka beebka ee shaqaalaha oo ah tamarta nadiifta ah iyo wax ku oolnimada tamarta.
Waxaa halkan ku sawiran Kenyetietta Quinn, Baadhaha Barnaamijka Home Weatherization Assistance Program (HWAP) oo la sawiran shuraakada bulshada ee IMPACT Community Action, taas oo uu booqday qoysaska dhakhligoodu hooseeyo si ay uga caawiyaan inay ka dhigaan kuwo tamarta u adeegsada si ku filan oo raaxo leh. Clean Energy Columbus waxay kala shaqaysaa shuraakooyinka sida IMPACT si ay usii taageerto barnaamijyada noocan ah iyo kuwa kale oo badan oo bulshadeena ah.
Shaqooyinka Tamarta Nadiifi
Barnaamijka Tamarta Nadiifinta ah ee Columbus waxa uu ku taageeri doona kumanaan shaqo oo mushahar wanaagsan leh oo leh faa'iidooyin, iyo sidoo kale raadinta taageerada iyo abuurista dhuun shaqaale oo kala duwan oo maxalli ah oo gala warshadaha tamarta nadiifka ah ee Columbus. In ka badan 4,000 oo shaqo ayaa laga taageeri doonaa Gobolka Ohio iyada oo loo marayo dhismaha iyo dayactirka hantida cusub ee dabaysha iyo cadceedda si loo xoojiyo guryaheena iyo ganacsiyada yaryar. Daah-furka barnaamijka, AEP Energy waxay shaqaaleysiisey 20 Shaqaale Waqti-buuxa ah oo loogu talagalay Xarunta Daryeelka Macaamiisha ee ku taal halkan Columbus, waxayna la shaqaynaysaa la-hawlgalayaasha sida IMPACT Community Action iyo Columbus Urban League si ay u qorto ku dhawaad 70 U doodaha Xiliyeedka si loo helo shaqo joogto ah oo suurtagal ah in qaybta tamarta nadiifka ah.
Iyada oo qayb ka ah barnaamijka, Magaalada Columbus iyo AEP Energy waxa ay samayn doonaan Guddiga Horumarinta Shaqaalaha Tamarta Nadiif ah oo leh maalgelin sanadle ah oo u go'an, looguna talagalay in lagu taageero horumarinta dhuumaha shaqada maxalliga ah, kala duwan ee agagaarka tamarta nadiifka ah iyo waxtarka tamarta.
Iyada oo ay jiraan ikhtiyaaro badan oo suuqa dhalinta tamarta ah, barnaamijka Magaalada waxaa loogu talo galey inuu noqdo adeeg la siiyo dadka degaanka ah iyo ganacsiyada yaryar. Magaaladu waxay mar kasta ku dadaali doontaa inay bixiso barnaamijka ugu faa'idada badan, tamarta nadiifta ah, iyo gunada bulshada. Ka qayb galka barnaamijka Clean Energy Columbus waxaa weeye ikhtiyaar, oo ma jiri doono kharash ama ganaax la iska qaado oo la xidhiidha ka bixitaanka ama doorashada ka qayb galka. Adiga ayaa leh ikhtiyaarka.
Kaalkuleetar Inta U Dhiganta Gaasaska Kul-hayaha
Marka aad geliso macluumaadka laydhka (kWh), kaalkuleetarka ayaa u badala qiimaha aad gelisay wasakhda gaasta kul-hayaha u dhiganta kaarbon dhay ogsaydhka iyada oo laga duulayo qodobada wasakhda ee inta hoos loo dhigay laydhka (Markan oo kale tamarta la cusboonaysiiyay ee lagu soo saaray Columbus Aggregation). Waxay kadibna soo dhigtaa qaabab u dhigma si loo sheego wasakhda. Waxaa loo turjubaa cabirada qayaxan eray-bixino la taaban karo oo aad fahmi karto, sida wasakhda sanadkii ee gawaadhida, qoysaska, ama warshadaha dabka.
Sida uu dhigayo websaytka EPA.gov: Fadlan oggow in qiyaasahani ay yihiin celcelis oo loogu talo geley in wax lagu sheego oo kaliya. Waa in aan loo isticmaalin kaydka wasakhda, raadka kaarboonta rasmiga ah, ama qiimaynta wasakhda ee rasmiga ah. Eeg Khayraadka Kale si aad u hesho agab dheeraad ah ee EPA ay ilaaliso ee qiimeynta wasakhda iyo Kaalkuleetarada Kale wixii kaalkuleetar dheeraad ah ee EPA ilaaliso.
Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg qaaciidooyinka iyo ilaha loo isticmaalay kaalkuleetarkan ee boga Xisaabinta iyo Tixraaca. https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
Sida loo isticmaalayo kaalkuleetarka
Guji Kaalkuleetarka ee ku yaal dhanka midig ee shaashadda. Kani waxa uu ku geyn doonaa boga EPA si aad ugu isticmaasho kaalkuleetarka.
Isticmaal tirada kWh ee aad dooratay. Gali xadiga kWh (ee bayaanka kharash-dalicidda ama tirada kale ee aad dooratay) sanduuqa dhexdiisa ee “Hadii Aad Leedahay Macluumaad Tamar” sanduuqa ah oo dooro kiiloowaatka saacadii ee laydhka.
This calculator helps translate abstract measurements into concrete terms.
** By clicking on this button you will be sent to a site not affiliated with Clean Energy Columbus.